မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလောက် ဖြစ်မလာရတာလဲ ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာကြောင့် မျှော်မှန်းထားသလောက် ဖြစ်မလာရတာလဲ ?
❖ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မျှော်မှန်းထားသလောက် ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာ ဝန်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့တပ်မတော်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဇွန်လ (၂၃) ရက် နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တပ်မတော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားခဲ့တာပါ။
❖ ဘာကြောင့် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး မျှော်မှန်းထားသလောက် ဖြစ်မလာရတာလဲဆိုတာတွေအတူ အနာဂတ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီး ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်နေလဲဆိုတာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဆရာသန်းစိုးနိုင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
❖ ၂၀၂၀ အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးမင်းကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် မျှော်မှန်းထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့တာပါ။
Previous articleBatman အဖြစ် ပြန်သရုပ်ဆောင်ဖို့ မိုက်ကယ် ကိတ်တန် ဆွေးနွေးနေ
Next articleကုလ က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်အဆို ဘယ်လိုအကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ ?